Ciyaaraha – Calan Qaran
Paul Pogba oo tijaabada caafimaad u maraya kooxda Manchester United
August 8, 2016 at 5:33 pm	0 comments
Paul Pogba ayaa soo gaaray garoonka Manchester United si uu u maro tijaabada caafimaad ee kooxda Man United uu ugu biirayo kooxda Juventus. Ciyaaryahanka qadka dhex ee u ciyaara qaranka Faransiiska ayaa ka soo duulay magaalada Nice isagoo ka degey garoonka diyaaradaha ee magaalada Manchester waxana uu gaaray garoonka tababarkaRead More
Koobka Fedraalka “Ammaan iyo dhaliil”
August 4, 2016 at 6:56 pm	0 comments
Si kastoo bilowgii Tartanka Maamul Goboleed yada ay dadku si weyn ugu ku kala aragti duwanaayeen gaar ahaan qaabka loo soo agaasimay. ayna abuur meen Doodo iyo Fikrado is mud mudaya. Hadana waxaa la oran karaa Tartankani waxa uu kulan saday Amaan iyo Dhaliil is barkan. = AMAAN:- ■ SidaRead More
Sh/dhexe/Hiiraan oo 2-1 uga badiyay Jubbaland
July 16, 2016 at 7:37 pm	0 comments
Ciyaartoyda maamul goboleedyada Jubbaland iyo Sh/dhexe/Hiiraan ayaa ku baratamay kulan aad u xiisa badan oo ka tirsan koobka Fedraalka ee ka socda garoonak Banaadir Stadium ee magaalada Muqdisho. Labada koox oo ka wada tirsan Group B ayaa soo bandhigay ciyaar wanaag ay ka heleen taageerayaashii u soo daawasha tagay, waxaanaRead More
Koobka Fedraalka oo Muqdisho ka socda (Benadir 5-0 K/G)
July 16, 2016 at 8:35 am	0 comments
Magaalada Muqdisho ee caasimadda Somalia waxaa ka billowday tartan aad u xiisa badan oo loo qabtay kooxo matalaya maamul goboleedyada ka jira dalka Somalia. Koobkan loogu magac daray Koobka Fedraalka ayaa waxaa ka soo qeyb galaya naadiyo kala matalaya Koofur Galbeed, Puntland, Jubbaland, Gal-mudug State, Sh/dhexe/Hiiraan iyo gobolka Benaadir ooRead More
Portugal 1-0 France CR7 yaa u diidan Laacibka Dunida?
July 11, 2016 at 10:40 am	0 comments
Xulka qaranka Wadanka Portugal ayaa taariikh u dhigay kooxaha qaramada qaaradda Yurub, kadib markii ay xalay ku guuleysteen koobka Euro 2016, oo lagu marti galiyay Faransiiska. Portugal, oo markii ugu horreysay hanatay koobkan ayaa dadaal dheer u soo gashay inay libinta qaadato, waxaana dadaal dheeri ah muujiyay xidigaha qaranka Portugal,Read More
Kulamadii xalay ee kooxaha Horyaalka Yurub
Kooxda Real Madrid oo qal-qiil ku jirtay lana maleynayay inay ka hari doonto tartanka ayaa 3-0 ku badisay waxayna uga mahad naqeysaa xidigeeda heerka caalami Cristiano Ronaldo. dhanka kale kooxda Manchester City ayaa taariikh dhigtay kadib markii ay 1-0 uga adkaatay kooxda PSG, waxaana markii ugu horreysay ay soo gaartayRead More
Tijaabada Calan Qaran
April 4, 2016 at 10:53 am	1 comment
Warar Tijaabo ah